भारतीय सैनिकलाई नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै २०७२ सालको भिडियो भाइरल « LiveMandu
काठमाडौं । अहिले नेपाल र भारतबीच सिमा विवादले सम्बन्धमा समस्या परेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले नेपालसँगको सिमा विवाद उल्लेख गर्दै हालैमात्र भारतको मोदी सरकार छिमेकका लागि खतरा भएको आरोप लगाएका थिए ।
उनले ट्वीटबाट भारतमाथि गम्भीर आरोप लगाइरहँदा पाकिस्तानबाट सामाजिक सञ्जालमा नेपाल भारतबीचको पछिल्लो अवस्थाबारे नियोजित तरिकाले प्रोपोगान्डा मच्चाउन थालिएको छ । पाकिस्तान जिन्दावाद नामको ट्वीटर पेजबाट १३ भारतीय सैनिकलाई नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको भनी भिडियो पोष्ट गरिएको छ । भिडियोमा भारतीय सुरक्षा फौज र नेपाली अधिकारी देखिन्छन् ।
उर्दूभाषामा पोष्ट गरिएको भिडियो ट्वीटमा लेखिएको छ, ‘यो भिडियोमा १३ भारतीय सैनिक नेपाली सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका हुन् । यो भिडियोमा नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारी र कायर भारतीय सैनिकहरु देखिन्छन् ।’
یہ ہے وہ ویڈیو جس میں 13 #بھارتی_فوجی جو #نیپالی_آرمی نے گرفتار کر لئے تھے.. اس ویڈیو میں #نیپالی فوج کے آلہ افسران اور #بھارتی قیدی فوجی دیکھے جا سکتے ہیں??#Nepal #India #IndianArmy #NepalIndiaBorder #NepalTime #IndianArmedForces pic.twitter.com/hR5KvmzIi4
— Pakistan Zindabad (@GHaZ_NAwE77) May 31, 2020
भिडियोको वास्तविकता के हो?
भिडियो १३ मंसिर २०७२, आइतवार (November 29, 2015) बिहान ८ बजेको घटनाको हो । १४ जनाको समूहमा रहेका एसएसबिका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु आपराधिक समुहको पिछा गर्दै हातहतियारसहित झापाको केचना प्रवेश गरेपछि केचनाका स्थानीयहरुको सहयोगमा गाउँलेले घेरा हालेपछि १ जना भागेर भारत प्रवेश गर्न सफल भएका थिए । त्यसपश्चात सशस्त्र प्रहरी बलले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि दुवै देशको सुरक्षाकर्मी र प्रशासन बसेर सिमा पारी फर्काइएका थिए । भिडियोमा यो विषय समेत उल्लेख छ । तर, नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भइरहँदा ताजा घटनाको रुपमा ब्याख्या गर्दै पुरानो भिडियो राखेर दुई देशबीच सैन्य मनमुटाव भएको जसरी अफवाह फैलाउन थालिएको छ ।
यो घटनाको पुरा जानकारीका लागि #News24 टेलिभिजनले घटनाको भोलिपल्ट नै लोकप्रिय टेलिभिजन शो #PowerNews मा प्रेम बानियाले तयार पारेको भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्